Izimfihlo Zebhizinisi leSalon: Imibono Yokumaketha Esebenzayo engu-10 Engakusiza Uvikele Amakhasimende Amakhulu | Martech Zone
Ama-salon atshala imali kakhulu endaweni yabo, abasebenzi babo kanye nochwepheshe, imishini yabo, kanye nemikhiqizo yabo. Kodwa-ke, into eyodwa abavame ukunganaki ukutshala kuyo imikhankaso yabo yokuthengisa. Amakhasimende angayithola kanjani i-salon yakho enhle ngenye indlela?
Yize ukumaketha kungaba yinto ekhohlisayo ukuyazi kahle, isalawuleka, futhi asikho isidingo sokwesatshiswa. Kunemibono eminingi yokuthengisa evivinyiwe yama-salon asebenza kahle ekuheheni amaklayenti nasekuthuthukiseni ukugcinwa kwamakhasimende.
Uma ungumnikazi we-salon onenkinga ofuna ukuqinisa izinhlelo zabo zokumaketha, bese ufunda ukuze uthole ukuthi yimiphi imibono yezokumaketha ongayenza ukuze uvikele amaklayenti amaningi.
Nikeza uhlelo lokudlulisa umngane - Enye indlela yokwandisa inani lamakhasimende akho ukusebenza nalabo osuvele unabo. Kungenzeka uyazibuza ukuthi kanjani. Yebo, ngohlelo lokudlulisela. A uhlelo lokudlulisela wuhlelo olubhekise kumakhasimende akho amanje. Lo mbono wokumaketha ukhuthaza amakhasimende akho ukuthi adlulisele umngani esalon yakho ngokubanika izaphulelo zokudluliswa ngakunye okuphumelelayo okufeziwe. Into enhle ngohlelo lokudlulisela phambili ukuthi abantu banamathuba amaningi okwenza ngokuthunyelwa kunekholi ebandayo noma i-imeyili evela kuwe. Lapho izincomo zivela kumthombo othembekile futhi osondele, kungenzeka ukuthi uthole ukunakwa kwamakhasimende amasha. Amakhasimende adlulisiwe atholakala ethembekile kakhulu kunamakhasimende ajwayelekile. Okunye okuhlanganisiwe ukuthi bayakwamukela ukusebenzisa imikhiqizo nezinsizakalo zakho ze-salon.
Yakha ukubambisana namanye amabhizinisi - Kunezindlela eziningi umuntu angazisungula ngebhizinisi lakhe. Enye indlela yokuba phezulu komncintiswano ukusebenzisana namanye amabhizinisi. Kaningi asikushayi indiva ukubambisana namanye amabhizinisi nokuthi kungashayela kanjani ithrafikhi eningi nemali engenayo yebhizinisi lakho zombili. Njenge-salon, ungasebenzisana namabhizinisi amaningi. Ngokuya ngendawo yangakini, ungasebenzisana namabhizinisi asembonini yobuhle nawe. Isibonelo, ungaxhuma nendawo yakho oyikhethayo yokuhlikihla, noma mhlawumbe ufuna ukusebenzisana ne-spa. Ngalo mbono wokumaketha, awunakuthinta kuphela amaklayenti akho kodwa nakwamanye amakhasimende ebhizinisi. Kuzoba isimo sokuwina kuwo womabili amabhizinisi akho kanye namakhasimende futhi ngenxa yamadili abawatholayo.
Nikeza ukukhushulwa kwe-salon - Ubani ongathandi isaphulelo? Kungakho izaphulelo, ukuthengisa, nezenyuso kuhlale kuyisikimu sokukhangisa esivivinywa isikhathi esisebenza kahle kunoma yiliphi ibhizinisi. Ukukhushulwa kwakho kokuthengisa kungancika ezintweni eziningi. Kungaba izivakashi zokuqala, noma mhlawumbe ngamaholide athile. Mhlawumbe ungasetha ngisho nesaphulelo sosuku lokukhokha noma ukuthengiswa kweviki. Ngokukhushulwa kwe-salon, ungakhuphula ithrafikhi ye-salon yakho futhi wandise ukubhuka. Vele, lapho ukwanda kokubhuka, maningi amathuba okuthi ukhiqize ukuthengisa ngakho-ke ukukhushulwa okwenziwa kahle kwe-salon nakho kungakhulisa imali.
Sebenzisa ukumaketha kwezokuxhumana - Umphakathi wonobuhle uyachuma ezinkundleni zokuxhumana muva nje futhi kubalulekile ukuthi abanikazi bama-salon bakusebenzise lokhu. Njalo setha i-akhawunti yezokuxhumana ye-salon yakho ukwenza kube lula ukuthi i-salon yakho itholwe ngabathengi abanentshisekelo. Uma usuthole i-akhawunti esebenzayo kuma-platforms wezokuxhumana ahlukene, ungakhohlwa ukumaketha ibhizinisi lakho. Shintsha ukukhangisa kwakho bese amasu wokumaketha umphakathi ngokususelwa kupulatifomu ngayinye ukuthola ulwazi olwenzelwe wena ngabasebenzisi. Sebenzisa ngokunenzuzo ipulatifomu yokwabelana esekelwe ku-Instagram ikakhulukazi bese uthumela ukubukeka okumangazayo ukuze unakwe ngamakhasimende anentshisekelo. Lungiselela ama-hashtag akho namagama asemqoka ukuze uthole ukunakwa okufanele.
Thola ukuxhumana okuningi ngokukhangisa nge-imeyili - Uma kukhulunywa ngokukhangisa ibhizinisi lakho ku-inthanethi, ungakunaki ukumaketha ibhizinisi lakho ngemikhankaso esekwe nge-imeyili. Lokhu kwenzelwa ukukhokhela amakhasimende angalandeli ama-akhawunti wakho wezokuxhumana kepha akunikeze i-imeyili. Inzuzo yokusebenzisa umkhankaso wokumaketha nge-imeyili ukuthi uthola imiphumela eminingi ngentengo eshibhile. Futhi, ungasebenzisa ukumaketha kwe-imeyili ukwenza eminye yemibono yokumaketha eshiwo ngaphambili. Isibonelo, ungathumela ama-imeyili anezixhumanisi zokudlulisela ezishumekiwe ukukhuthaza amakhasimende ukuthi adlulisele umngani ngesephulelo. Futhi ungakhuthaza ukuthengisa noma ukukhushulwa kumakhasimende angazi nge-imeyili yawo. Konke lokhu nokuningi kungenziwa nge-imeyili futhi ungalungiselela le nqubo ngokusebenzisa i uhlelo lokuphathwa kwezimpahla ze-salon.
Sebenzisa ukuhlela isoftware - Ukusebenzisa ukuhlela isoftware ukubekisa ama-aphoyintimenti e-salon yakho kungasiza ekwenzeni inqubo futhi kwenze kube lula kakhulu ukuhlela ukutholakala kwabasebenzi bakho namakhasimende akho. Kunezinto eziningi amaklayenti nabasebenzi abangazisebenzisa uma besebenzisa lolu hlobo lwesoftware. Isici esisodwa esenza ukubhuka i-aphoyintimenti kube lula ukubuyekezwa kwekhalenda lesikhathi sangempela amakhasimende angabuka ku-inthanethi. Lokhu kwenza kube lula kumakhasimende ukuthi anqume ukuthi afuna ukuhlela nini ama-aphoyintimenti awo ukuthola ukwelashwa akuthandayo. Ngaphandle kwalokhu, ukuhlela isoftware kungakhumbuza amakhasimende akho ngama-aphoyintimenti abawabeke esalon yakho. Uma amaklayenti kufanele akhansele, okungenani ngeke waziswe ngosuku lwe-. Lokhu kungakuvumela ukuthi ukhulule isikhathi sokwamukela okunye ukuqokwa.
Joyina imisebenzi yendawo - Into eyodwa amasaluni amaningi angayisebenzisi umphakathi wendawo. Ama-salon amahle kakhulu anobudlelwano obuthile nomphakathi ngoba, ngemuva kwakho konke, yilapho iningi lebhizinisi labo livela khona. Kungakho ama-salon kufanele enze konke okusemandleni ukujoyina imisebenzi yasendaweni. Noma ngabe imicimbi ingeyemaholide noma mhlawumbe yombukiso wemfashini, ukukhombisa ukuxhaswa kwakho kungenza igama lebhizinisi lakho lisabalale lapho futhi kwandise amakhasimende akho.
Buyisela emphakathini wakho - Ukukhuluma ngokujoyina imisebenzi yasendaweni, enye indlela yokwenza ubudlelwano nabantu bendawo kungukuthi ukubuyisela emphakathini. Mhlawumbe cela abaphathi bendawo ngezindlela ongasiza ngazo umphakathi. Mhlawumbe unganikela ngezinwele zamahhala kwabangenamakhaya. Mhlawumbe ungasiza ukuxhasa umcimbi wosizo owenzeka ngokuzayo. Le yindlela enhle yokuzibandakanya namakhasimende amasha angahle afudumeze inhliziyo.
Thola i-salon yakho efakwe kuhlu kwizikhombisi ezikwi-inthanethi - Izibalo zakamuva zikhombisile ukuthi iningi labasebenzisi beselula lifuna ibhizinisi online noma umkhiqizo online ngaphambi kokuvakashela isitolo. Yingakho udinga ukwenza ibhizinisi lakho litholakale futhi litholakale ngangokunokwenzeka. Enye indlela yokwenza lokho ukufakwa kuhlu kwebhizinisi lakho kuzikhombisi-ndlela eziku-inthanethi ezinjengeYelp noma kuGoogle Business. Ngale ndlela, abashisekeli abanentshisekelo bangathola kalula i-salon yakho bese bekhomba amahora akho okuvula kanye nezinsizakalo ozihlinzekayo.
Yenza ukusetshenziswa kwezikhangiso ezihlela kabusha - Uma ikhasimende livakashele isiza sakho, noma ngabe ligcina ngokuthenga noma cha, kulula ukubenza baguquke kunamakhasimende amasha angakaze ahlanganyele nomkhiqizo wakho. Ukuze ukhombe lezi zinhlobo zamakhasimende, kungcono ukusebenzisa izikhangiso ezihlela kabusha. Uma usanda kwethula umkhiqizo omusha noma ukwelashwa, hlola uhlu lwamakhasimende angaphambilini okungenzeka ukuthi abe nentshisekelo kuwo futhi uwaqondise ngezikhangiso zomkhiqizo / ukwelashwa okushiwo.
Ukumaketha i-salon yakho akudingeki kuchaze imali enkulu kumabhodi amakhulu noma ukuthumela amaflaya azungeze idolobha. Kunemibono eminingi yokumaketha ongayenza namuhla.
Konke kumayelana nokuxhumana nemakethe yakho eqondiwe kanye nokuvula i-salon yakho ifike emphakathini wendawo. Ungalindi isikhathi eside ngaphambi kokuba uqale ukusebenzisa lezi zindlela zokumaketha ukuze uzisize zibe ngcono kangcono ngokushesha okukhulu.
Tags: imeyili Marketingimisebenzi yasendaweniUkukhushulwai-retargetingumbukisoukumaketha kwe-salonukuhlela isoftwareSocial Media Marketing
Amathemba Okuhlanganisa I-Blockchain Technology Ne-Intanethi Yezinto